ဆောင်းလူ ● ငဖား …. ကွီး .. ညေး ..ခေး ..နှင့် …ဘွီး … | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖိုးထက် - လူပါးဝသော စာအုပ်
ညွန့်ထွေး - လှည့်လည် အလှူခံခြင်း အနုပညာ
ဌေးဝင်း (ဂျာမဏီ) ● ငပလီအလှနဲ့ တကယ့်ဘဝ
မောင်တမ်းတ ● အမှောင်ထဲကလာ အမှောင်ထဲကိုသွား
ဆောင်းလူ ● ငဖား …. ကွီး .. ညေး ..ခေး ..နှင့် …ဘွီး …
စကြာဝဠာတနေရာတွင် အခြေစိုက်တည်ထားသည့် စင်္ကြ၀ဠာကျော် မီဒီယာကြီးတခုမှ ထုတ်လွှင့်နေသည့် နေ့စဉ်အကြောင်း အရာများကို ငဖားတယောက် ဂြိုလ်ပြာပေါ်မှ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် ထိုင်ကြည့်နေမိလိုက်သည်။ ထုတ်လွှင့်မှုများကို အချိန် နှင့်တပြေးညီ အစဉ်တစိုက် ထုတ်လွှင့်နေသည့်အတွက်လည်း ငဖား ကြည့်ဖြစ်မိခြင်း ဖြစ်သည်။
သတင်းကြေညာသူက ခွန်းဆက်လေးဖြင့် စတင်လိုက်သည်။
ဘီကလား ပီလီအော်ကနေ စွတင်လာတဲ့ ဆွိုင်ကလုန်း ရွက်နုအကြောင်းကို တီဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှီ …
ဆွိုင်ကလုန်း မွီတိုင်း ရွက်နုဟာဖြင့် ဘီကလားဒိကွိမ်းချီကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ယီနိည ၈ နွာရွီအချိန်နဲ့ ၁၂ နွာရီအချိန်ကြားအတွင်း ၀ွီရောက်နိုင်ကြောင်း မူးလွီဝွီသနှင့် ဇွီလဗွီဒမှ ထုတ်ပြန်ထွားပါတယ်ရှီ ….
စုစုယဲ့ယဲ့သော လူတချို့သာနားလည်နိုင်မည့် ဘာသာစကားတမျိုးနှင့် ထုတ်လွှင့်သွားသည်ကို ငဖားတယောက် ဘာသာပြန် အချက်ပေးအစနစ်အရ မုန်းတိုင်းဝင်ရောက်လာနိုင်သည့်အကြောင်းအရာကို ကြေညာနေသည်မှန်း အလိုအလျောက်သိ လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။ ဘေးနားက ငဖား၏ စကားလုံးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေသည့် ဘာသာဗေဒဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီးမှလည်း စကား လုံးများကို ခွဲထုတ်လိုက်… ဖဲ့ထုတ်လိုက် … ပြန်ပူးလိုက် … ပြန်ကပ်လိုက်ဖြင့် .. တ၀ီဝီလည်ပတ်လျှက်ရှိနေ၏။ တချို့သည် ကား … သူတို့၏ မူလဗီဇ စကားအသုံးအနှုန်းများသို့ ပြန်လည်သန့်စင်ရောက်ရှိကုန်ကြပြီဖြစ်သည်။
ကွီး ….. ခေး ….. ညေး … မွီးမ … မွင်းခါးတို့အား ခုချိန်ထိ ခွဲခြားသန့်စင် ဖယ်မထုတ်ပေးနိုင်သေး …။
ထိုအချိန် ဇူကာဘတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့် အပလီကေးရှင်းတခုဆီမှာ တိန်ခနဲ အသံနှင့်အတူ …
ကွီး …. ပြင်ပဘာသာဗေဒဌာနတခုက … အခု လူတစုသုံးနေတဲ့ ဘွီး …ဆိုတာကို တိတိကျကျဘာသာပြန်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေတယ်လို့ဆိုတယ် …။ အဲ့ဒါ ဘာ အဓိပ္ပါယ်လည်းဆိုတာ သိရင် ပြောပြပါ ကွီး ….။
ငဖားဥဏှောက်တို့အလုပ်လုပ်ကာ ဂူဂဲလ်ထရန်စလိတ်ဆီသို့ အပြေးအလွှားကြည့်မိသည်။ ဘာသာစကားပေါင်းမျိုးစုံတို့ဖြင့် ရှာကြည့်မိသည် …။
ဘွီး …. ဟူသည် ပြင်သစ်ပြည်က ဆင်းသက်လာသဘော …
ဂရိက ဆင်းသက်လာသလော …
အာဖရိက စကားပေလော ….
ငဖားဥဏှောက်ခြောက်လာလေပြီ ….။ နောက်ဆုံးတမုံ့ စဉ်းစားမိသည်တွင် ဤသည်ကား ကိုရီးယားစကားက သက်ဆင်းလာ သည်ဟု စိတ်ထင်မိသည် …။ ကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်မိသည် …။ မတွေ့ …။ ဤမျှ ထူးခြားနက်နဲလှ သည့် စကားလုံး မည်သို့ မည်ပုံ အစရှာရမည်ကို ငဖား မသိတော့ …။
ငဖားလက်တို့ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်များပေါ်ရှိ ခလုတ်ပေါ်တို့ တင်လိုက်မိသည် … ခွဲခြားသန့်စင်မှု မပြုနိုင်သေးသဖြင့် ထွက်လာသည်က .. .ညေး … မတတ်နိုင် ….။ လောလောဆယ် တဖက်သူ နားလည်သည်က ဒါပဲရှိသည်။
ညေးရေ … ကွီးလည်း …ကွီး … ခေး .. ညေး တို့လောက်တော့ သိတယ်ကွာ ….။ ဘွီးဆိုတာကြီးတော့ မသိဘူးကွ …။ အကြောင်းအရာက ဘာများမို့လို့လဲကွာ ….
ကွီးရေ .. သူတို့ပြောတာတော့ ….. xxxxx xxxxxx xxxxx တဲ့ဗျ …။ ကွီးဖားကလည်း ဒါလောက်တောင် မသိဘူးလားဗျာ …။ ညေးလည်း အတိအကျ ဘာသာပြန်မပေးတတ်လို့ …။
ငဖား ဘာသာဗေဒဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီးသို့ အပြေးအလွှားသွားကာ … ထိုအရေးကြီးသော ဘွီး အား အနာဂတ်လူတို့ လက်ဆင့် ကမ်းမသယ်ဆောင်သွားနိုင်စေရန် … စက်ထဲသို့ထည့်ကာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခိုင်းလိုက်သည်။
အဓိပ္ပါယ်ပေါင်းမျိုးစုံဖြင့် …. ပဋိပက္ခကင်းဝေးစေမည့် စကားအသုံးအနှုံးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေသည်မှာ ….
တရက်လည်း မပြီး …
တလလည်း မပြီး …
တနှစ်လည်း မပြီး ….
ရှိပြီးသားစကားလုံးလည်း ပြန်လည်ခွဲထွက်မလာ ….
မလာသည့်အပြင်…. စက်ကြီင်္းထဲတွင် …ကွီး … ညေး .. ခေး … မွင်းခါး … မွင်းမတို့နှင့်အတူ ဘွီးသည်လည်း တ၀ီဝီ တ၀ူဝူဖြင့် လုံးချာလိုက်လျှက် …။